Faallo: Qaladaadka wariyayaasha soomaaliya qaar. | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Faallo: Qaladaadka wariyayaasha soomaaliya qaar.
Faallo: Qaladaadka wariyayaasha soomaaliya qaar.
written by warsan radio 05/08/2015
Saxafada Soomaaliya waxaa mudooyinkii dambe kusoo badanayay is eedaynta dhexdooda ah Waxaana xusid mudan in qof walba oo wariye ah oo ka hadla arimaha saxaafada Somalia uu farta ku fiiqayay qaladaadka ka dhex jira saxaafada soomaaliya.
Inkastoo ay jiraan wariyayaal badan oo maanka ku haya sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka weriyaasha soomaaliyeed. Hadana aad ayay u yartahay inta qalinka u qaadatay in ay tilmaan ka bixiso wadada lagu gaarikaro xalka rasmiga ah.
soomaaliya marka laga hadlaayo waxaa ka jirto dhibaatooyin ku saleysan qabiil taa oo keentay xitaa in wariyaashii qaar ay lasaftaan qabiilkooda. inkastoo latilmaaho in weriyaasha qaar ay ka qeyb qaataan colaadaha soomaaliya kajira .dadka qaar waxaa ay tilmaamaan in xitaa warbaahinta ay qeyb weyn ka qaadato dagaalada soomaaliya ka dhacaya ,
marka aad fiiriso idaacadaha dalka soomaaliya qaarkood waxaa kuu soobaxaysa dhibaatooyinka la tilmaamay . baldhageyso idaacadaha qaar ee soomaaliya si aad u ogaatid xogta rasmiga ha idaacadkasta waxaa ay sheegtaa in bulshada u shaqeyso lkn bulshada waxaa logu shegeeya lacagtooda, xitaa waxaa ay kala qeybiyeen gobolkadii dalka soomaaliya intii ay isu keeni lahaayeen. taa waxaa cadeyn uh weriye kasta waxaa lagu tilmaamay deegaan taa oo meesha ka saartay is dhaxgalkii bulshada. xiliyadii hore wariyaasha soomaaliyeed waxaa ay ahayen kuwo iska war qabo lkn hada waxaa jira dhibaatooyin badan oo weriyaasha dhaxdooda ah.
Gobolka hiiraan marka laga hadlo sansdihii danbe waxaa sii xumaaday u shaqeynta bulshada soomaaliyed iyadoo qaar kamid ah weriyaasha gobolka hiiraan la edeyo. magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolka hiiraan waxaa ka howl galo wariyaal badan. mana helaan sibinaaro kor loogu qaadayo aqoontooda .
qaar kamid ah wariyaasha ka howl galo magaalada beledweyne kulan ay ku yeeshen magaalada ayey ugu hadleen cadaalada darida kajirta gobolka hiiraan.
waxaana ay sheegen in loobaanyahay in si cadaalad ah loogu qeybiyo siminaarada ay helaan weriyaasha soomaaliyeed . si uu qofkasta u helo aqoon ku filan oo ay shacabka soomaaliyeed ugu shaqeeyaan si cadaalad ah.
waxaa jiro hay’ado badan oo sheegta in weriyaasha ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay u qabtaan siminaaro kor logu qaadayo aqoonta wariyaasha ku nool magaalada beledweyne .
Dhamaad: Hadaba dhamaan wariyayaasha Soomaaliyeed waxaan ku amaanayaa howsha ay hayaan iyo horumarka ay ka gaarayaan dhanka warbaahinta waxaana rajeynayaa inta dhiman ee qaladaadka ahna la xalindoono haduu alle idmo.
Faallo: Qaladaadka wariyayaasha soomaaliya qaar. was last modified: August 5th, 2015 by warsan radio
Dhageyso:- Afhayeenka Odiyaasha Dhaqanka Konfur Galbeed Soomaaliya Malaaq Deerow Wareysi Bixiyey..
DHAGEYSO:- Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya oo Waxba kama Jiraan ku Tilmaamey inay Doonayaan Mudo kororsi
Garoonka Diyaaraha Degmada Waajid Ee Macalin Isxaaq Oo Dib u Habeen Lagu Bilaaway.
MAAMULKA DEGMADA XUDUR OO KA WARBIXIYEY HOWLGALLO AY KA SAMEEYEEN DEGMADAASI
Dhageyso:-WADJIR IYO HORSEED Tartan Aqooneedka Idaacada Warsan Qiibtii 5 aad
Dhageyso Wareysi: Gudoomiyaha Degmada Baydhabo Oo Kaga Qiibgaley Muqdisho Shir Loogu Hadlaayey Qoxootiga
Daawo:Sida quruxda badan ee Madaxweynaha Somalia loogu soo dhoweeyey Baydhabo
Dhageyso:-wareysi+Ciidamada KGS iyo Al-shabaab Oo Isku Fara Saarey Gobolka Bakool